२३ वर्षीया सुन्दरी नर्स, जसको सुन्दरताले हुन्छन् सबै लठ्ठ ! (८ तस्बिर) - Everest Dainik - News from Nepal
२३ वर्षीया सुन्दरी नर्स, जसको सुन्दरताले हुन्छन् सबै लठ्ठ ! (८ तस्बिर)
ताइवानी एक नर्सका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । २३ वर्षीया नर्स केरीना लिनले अहिले इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाएकी हुन् । उनकै कारण ताइवानको एक अस्पतालमा पुरुष बिरामीहरुको थेगी नसक्नु लाइन लाग्ने गर्छ। उनीहरु त्यहाँ राम्रो डाक्टर भएको कारण होइन, सेक्सी नर्स भएका कारण आउने गरेको बताइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस एकै अस्पतालका २ चिकित्सक र ५ नर्सलाई कोरोना संक्रमण
इन्स्टाग्राममा उनका फ्यानहरुको फलोइङ पनि लोभलाग्दो छ । ब्रिटिस अनलाइन द सन, डेलीमेल लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उनको फोटो प्रकाशित गरेपछि उनी संसारभर चर्चित बनेकी हुन् । इन्स्टाग्राममा उनले अपलोड गरेका केही तस्वीर यस्ता छन्-
ट्याग्स: केरीना लिन, नर्स